Polonnaruwa ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Polonnaruwa (Polonnaruwa)
Fampahalalana momba ny Polonnaruwa (tranom-bakoka arkeolojika arkeolojika)
Zava-dehibe amin'ny Polonnaruwa
Zavatra hafa mahaliana
Ahoana ny fomba ahatongavana amin'ny Polonnaruwa
Aiza no hipetrahana ao Polonnaruwa ary ohatrinona ny vidiny
Vidiny ao Polonnaruwa. Fomba fandidiana. Fidirana maimaim-poana
Polonnaruwa amin'ny sarintany
Weather amin'izao fotoana izao + forecast
Polonnaruwa: fampahalalana ankapobeny
Polonnaruwa dia tanàna tantara malaza any Sri Lanka izay mpizahatany. Ny halaviran'ny Colombo dia 212 km.
Fantatra noho ny renivohitra faha-2 amin'ny fanjakana Sinhala fahiny (tamin'ny taonjato faha-9 ka hatramin'ny taonjato faha-13).
Amin'izao vanim-potoana izao, Polonnaruwa dia sisa tavela amin'ny tanàna lehibe iray, izay mifantoka amin'ny antsoina hoe valan-javaboary tanàna. izy ireo dia isan'ireo toerana mahafinaritra indrindra an'i Sri Lanka. Nosoratan'ny UNESCO ihany koa tamin'ny 1982.
Polonnaruwa Archaeological Park dia ao amin'ny Triangle Kolontsaina Sri Lankan. Tonga eto amin'ity firenena ity hifankahalala amin'ny kolontsaina sy ny tantara ianao, tokony hisaona amin'ity tanàna ity ianao.
Anuradhapura dia lasa renivohitra voalohany an'ny fanjakana Sinhala taloha.
Izao dia iray amin'ireo toerana tena malaza amin'ny fitsangatsanganana. Saingy taorian'ny taorian'ny faharavana mafy an'i Anuradhapura nataon'ireo mpandresy dia namindra ny renivohitra ho any Polonnaruwa i Sinhals taloha. Ity farany dia renivohitra mandra-pahatongan'ny taonjato faha-13, avy eo dia nalain'ny fahavalo avy tany India.
Taorian'io dia lasa renivohitra an'ny fanjakana Sinhala ny tanànan'i Dambadenia. Saingy nandritra ny taonjato maro niandohan'i Polonnaruwa dia teo amin'ny toeran'ny renivohitra, naorina lapa sy trano ary sarivongana lehibe no naorina tao amin'ity tanàna ity.
Ny faritry ny valan-javaboarin'i Polonnaruwa Archaeological, izay ahitana ny ankamaroan'ny mpizaha dia tena lehibe. Saingy, misy zavatra sasantsasany hita any ivelan'ny azy - ity no tranombakolin'i Polonnaruwa, tranombakolon'ny mpanjaka ao Nissankamalla sy ny sasany hafa. Noho izany, fiara, bisikileta na bisikileta mifanaraka kokoa noho ny mivezivezy amin'ny zaridaina. Ny bisikileta dia manofa trano, trano fandraisam-bahiny ary akaikin'ny fidirana amin'ny Valan-javaboary arkeolojika.
Ny drafitra amin'ireo zava-dehibe ataon'i Polonnaruwa
Drafitra amin'ny atinton'ny Polonnaruwa
Ny fidirana amin'ity zaridaina ity dia karama (ho an'ny olon-dehibe - 4 rupee, ho an'ny ankizy - 500). Eo ivelan'io dia misy zavatra marobe maromaro kokoa ampiasaina amin'ny fitsidihana. Ao amin'ny Archaeological Park, rehefa mifindra, dia mora sy malefaka hivezivezy tsy misy sarintany mampiasa ireo marika fotsiny ihany.
Azonao atao ny mandinika ny tontolon'ny zaridainan'ny zaridaina mandritra ny 4-5 ora, na izany aza, ny zavatra hafa any ivelany dia mitaky andro antsasaky ny andro.
Manakaiky ny tranon'ny Polonnaruwa Museum misy bileta misy fampahalalana, ary eo akaikin'ny zavatra tsirairay dia misy famantarana famantarana ny teny anglisy.
Tivanka Image House (Thivanka Image House)
Tivanka Image House - tempoly voaravaka tsara tarehy, izay mametraka tsangambato Buddha 8 m avo.
Thivanka Image House. Sarivongan'i Buddha 8m ny haavony
Ao amin'ity tempolin-tsary ity dia misy frescoes taloha (ilay hany voatahiry ao Polonnaruwa) izay mamaritra ny fiainan'i Buddha alohan'ny fanazavana sy aorian'izany.
Lotus Pond (lota dobo)
Lotus Pond dia farihy iray izay mitovitovy amin'ny voninkazo voaroy.
Sarivongan'i Buddha ao Gal Vihara any Polonnaruwa
Tempolin'ny vato Buddha any Polonnaruwa i Gal Vihara. Anisan'ny mahasarika azy indrindra. Sarivongana Buddha lehibe efatra, izay voasokitra ho vatolampy granita.
Ny antsipiriany sy ny habe dia mahavariana
Nipetraka Buddha tao Gal Vihara
Naipena Vihara - Tempoly masina natao mba hivavahana amin'ny andriamanitra Visnu. Namboarina biriky, ary tsangana sisa no tavela mandraka ankehitriny.
Ranomasimbe Parakrama (Samudra parakrama)
mifanohitra amin'ny Polonnaruwa Archaeological Park dia misy ny "Ranon'ny Parakramabahu King" - farihy lehibe iray noforonina tamin'ny baikon'ny mpitondra Parakramabahu Voalohany.
Demala Maha Sei (Demala Maha Seya)
Stupa tsy nahomby teo an-tampon-kavoana. Demala Maha Seya
Demala Maha Seya - havoana avo rakotra zavamaniry marevaka. Misy stupa eo amboniny, ny fanamboarana izay tsy feno. Misy ny sisa tavela amin'ny firafitra sasany. Afaka miakatra an-tampon-kavoana ianao amin'ny lalana maloto. Rehefa manangana ianao dia tsy miankina amin'ny fakany sy rantsan'ny hazo ihany.
Ny complexe monasitera Alahan Piriven dia naorin'ilay mpanota Sinhala Parakramabahu I ary ahitana rafitra maro samihafa - trano, trano fisotroana, fandroana, valan-javaboary, dobo. Ao amin'ny faritaniny koa ny monasitera mazàna amin'ireo moanina Baddhashima Prasad.
Tempolin'i Lankatilaka Vihara
Lankatilaka Vihara dia trano biriky avo iray voaravaka sary sokitra mahafinaritra. Ny sary ao anatiny dia misy sary sokitra Buddha 12 m.
Sarivongan'i Buddha ao Lankatilaka Vihara
Stupa Kiri Vehera (Kiri Vehera)
Manakaiky ny tempolin'i Lankatilaka dia stupa fotsy Ve Vehera (anarana iray hafa - Rupavatha Stupa). Ity no stupa andiany faharoa lehibe indrindra ao Polonnaruwa, izay tazomina amin'ny endrika saika tany am-boalohany.
Any atsinanana sy avaratra any misy stupa 2 fanampiny, izay kely kokoa. Inoana fa ny mpitondra Parakramabahu I sy ny vadiny no nalevina ao anatiny.
Stupa Rankot Vehera (Rankot Vihara)
Kompleks monasitera iray hafa dia ahitana ny stupa Rankot Vehera (Rankot Vihara). Ity no stupa lehibe indrindra ao Polonnaruwa ary faha-4 lehibe indrindra ao Sri Lanka.
Stupa Rankot Vihara
Ny laharan'ny Rankot Vihara any avaratra any ankavia dia manenjana ny sisa tavela amin'ny hopitaly monasitera tranainy - Monastic Hostipal.
Hopitaly Monastic any Polonnaruwa
Favoan'i Goppal Pabat (Gopala Pabbatha fialofana amin'ny zohy)
Eo akaikin'ny hopitaly monasitera tranainy ihany koa misy zohy any anaty harambato - Goppala Pabata.
Fialofana any Gopala Pabbatha any Polonnaruwa
Stupa Manik Vehera ao Polonnaruwa
Manik Vihara dia stupa iray hafa hita eo amin'ny dian-tongotra avo. Ity no stupa tranainy indrindra amin'ny Polonnaruwa.
Tsara homarihina ny stupa of Pabalu Vehera, izay manana endrika am-boalohany. Ny manodidina azy dia ny sisa tavela amin'ny rafitra hafa.
Stupa Pabalu Vehera
Tempoly Hindu any Polonnaruwa
Ireo teboka hafa dia mahaliana an'i Polonnaruwa
Ny kianja masina ao Dalada Maluva
Ny kianjan'ny masin'i Dalad Maluv, ao anatin'ny sisin-tany izay misy ny fananganana voalohany an'i Nissan Lata Mandalay.
Tempoly 3 izay noheverina fa nify ny Buddha. Namboarin'ireo mpitondra samihafa izy ireo: ny tempolin'ny Atadage - naorin'i Vijayabahu I (nanjaka 1070-1110); Vatadage - Parakramabahu I (nanjaka tamin'ny 1153–1186); Khatadage - natsangana Nissankamalla (nanjaka tamin'ny 1187-1196).
Sathmahal Prasada Hafa stupa
Gal-Pota (Boky vato) Gal-Pota
Ny boky grika an'ny Mihintale azy ireo. 25 taonina
Gal-Pota (Boky vato) - takelaka iray izay misy sary soratana amin'ny mpitondra ny Nissankamall. Mitentina 25 taonina eo ho eo izy io. Tonga tao Polonnaruwa avy any Mihintale.
Royal Palace Parakrambahu
Ny fahasarotan'ny mpitondra an'ny Parakramabahu I, izay ahitana lapa, kianja iray, loharano voaforona Kumar Pokun ary ireo rafitra sasany.
Ivelan'ny Archaeological Park, ankoatry ny zavatra eo ambony, misy koa:
ny sisan-javatra amin'ny trano fitehirizam-bokin'i Potgul Vehera ao Polonnaruwa
Ny sarivongavan'ny mpitondra Parakramabahu I.
Sarivongan'ny mpitondra Parakramabahu faha-1
Mahazo mandeha amin'ny Polonnaruwa avy any Colombo ianao amin'ny lamasinina na fiara fitaterana, afaka mahazo koa ianao avy amin'ny tanàna rehetra amin'ny fiara manofa na bisikileta.
Amin'ny lamasinina mankany Polonnaruwa
Fiaran-dalamby 2 ihany no tonga isan'andro any Polonnaruwa, izay samy avy any Colombo.
Ny fiaran-dalamby voalohany dia fiaran-dalamby andro miala amin'ny renivohitr'i Sri Lanka ankehitriny amin'ny 06:50 ary tonga any Polonnaruwa 12:08. Ny fiaran-dalamby faharoa dia alina, hiainga tamin'ny 19:15 ary tonga tamin'ny 01:34. Miverina any Colombo, ny lamasinina voalohany dia miala amin'ny 22:28 ary tonga amin'ny 04:49, ary ny faharoa dia amin'ny 09:25 ary tonga tamin'ny 15:25. Vidiny tapakila - vavahady 185-620 (arakaraka ny sarangan'ny fiara).
Ny garan-dalamby ao Polonnaruwa dia eo akaikin'ny afovoan-tanàna miaraka amin'ireo toerana mahasarika, ka avy amin'izany dia tsy maintsy mandeha mankany afovoany amin'ny al-tuk-tuk ianao.
Amin'ny fiara fitaterana mankany Polonnaruwa
Ny bus mankany Polonnaruwa dia saika avy any an-tanan-dehibe ao Sri Lanka no tena lehibe sy tsy misy dikany. Rehefa miala any Polonnaruwa amin'ny fiara fitateram-bahoaka avy amin'ny tanàna hafa, dia tsara kokoa ny manomboka mitondra fiara amin'ny 1 ora voalohany, satria raha tsy izany dia misy ny loza tsy hisian'ny fotoana hahatongavana amin'ny antoandro. Ny tapakila tapakila dia tsy takiana mividy mialoha; azonao atao ny mividy foana ao amin'ny gara bus alohan'ny handehanany.
Fiara iray no mandao an'i Colombo avy amin'ny gara iray any amin'ny faritra Pettah. Ny vidin'ny tapakila manomboka amin'ny rupees 160. Maharitra 6 ora ny lalana. Bus iray mankany Polonnaruwa avy any Kandy mitentina 80 rupee, fara fahakeliny, ny dia. Tsy maintsy mandeha fiara fitaterana mankany Polonnaruwa avy any Anuradhapura ianao mandritra ny 4 ora, ny vidiny dia 3 rupees.
Aiza no hipetrahana ao Polonnorow
Misy maro ny hotely sy trano fandraisam-bahiny ao Polonnaruwa, fa ny ahita azy ireo eto dia tsy mora. Ny tanàna dia tsy misy faritra manokana izay hifantohany. Noho izany, raha te hahita toerana hitoerana vetivety dia mila manenjana ny tenanao ianao. Ao amin'ny afovoan'i Polonnaruwa ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny sy ny hotely. Noho izany, raha mbola tsy nametraka ny trano fonenanao mialoha ianao dia tokony hotadiavinao eto. Na izany aza, matetika ny toerana rehetra ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fandraisam-bahiny dia alaina.
Aoka ho araka izay mety, dia tsara ny misafidy toerana akaikin'ny arkeolojia. Mazava ho azy fa ny tanàna vaovao dia tsy mahaliana amin'ny lafiny fizahan-tany.
Afaka mangataka fanampiana ianao amin'ny tuk-tuker
Afaka mampiasa ny fanampian'ny tuk-tuker ianao. Afaka entina any amin'ny trano fandraisam-bahiny sy hotely maromaro izy ireo amin'ny sarany kely. Marina, miaraka amin'izay, ny vidin'ny trano ho anao dia ho somary be ny vidiny (satria ny tompon'ny toeram-panorenana dia manome valisoa ho an'ny tuk-tukers satria mitondra ny mpanjifany ho azy ireo). Na izany aza, matetika io fomba fitadiavana trano io no hany tokana raha tsy voavoatra ao amin'ny Internet mialoha.
Vidiny azo antoka
Ny vidin'ny trano any Polonnaruwa (ary tsy izy ihany) dia miakatra be amin'ny ankamaroan'ny tanàna hafa any Sri Lanka. Efitrano fandraisam-bahiny madio kokoa na latsaka miaraka amin'ny fametrahana fanalam-piaramanidina dia mitentina $ 30 isan'andro
Trano fandraisam-bahiny akaikin'ny Polonnaruwa
Vidiny ao Polonnaruwa. Fomba fandidiana
Ny Archaeological Museum of Polonnaruwa dia misokatra isan'andro manomboka amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 18:00
Fidirana ho an'ny olon-dehibe - 4500 rupees = $ 25 (2019-20)
Vidiny ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona - 2250 rupees = $ 12,5 (2019-20)
Ankizy latsaky ny 6 taona. Malalaka ny fidirana.
Ho an'i Polonnaruwa maimaimpoana!
Raha ny marina, raha jerena fa ny Archaeological Museum of Polonnaruwa dia goavana ary voapaika amin'ny fefy tsotsotra fotsiny dia azonao idirana maimaimpoana. Soa ihany ho amin'izany dia nisy famoretana marobe teo amin'ny rindrina. Afaka mandeha amin'ny bisikileta amin'ny alàlan'ny iray amin'izy ireo mihitsy aza ianao. (Hamarino!)
Saingy, tsy dia hahomby izany. Satria misy lahatsoratra miely miparitaka manerana ny faritany, izay raha tsy misalasala dia mety hangataka anao hampiseho tapakila fidirana. Ary raha tsy misy izany, dia angatahina ianao handao an'i Polonnaruwa. Marina dia afaka manasa ny polisy eo an-toerana ihany koa izy ireo raha tsy dia mahay mandanjalanja ianao.
Fa hojeren'izy ireo ihany koa ny safidy fandoavana ny tapakila "very" eto an-toerana :). 4500 rupe isaky ny olona hamaha ny olana 🙂
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/RftVattUFzyAVuL88
Weather in Polonnaruwa anio + forecast
Ny Widget ifotony eto ambany dia ahafahanao mahita mikasika ny toetr'andro any Polonnaruwa amin'izao fotoana izao. Ary azonao atao koa ny mahita ny vinavina mandritra ny telo andro (ny marika eo amin'ny faran'ny widget)
Review ho an'ny Polonnaruwa
Valiny ho an'ny Polonnaruwa (Tripadvisor)
Afaka mahazo maimaim-poana ianao. Ampy ny hifindra amin'ny fefy avy amin'ny fidirana mankamin'ny havanana. Ary aorian'ny kilometatra dia hisy fiatoana eo amin'ny rindrin'ny vato. Maloto eo an-toerana ary tsy maika amin'ny fanitsiana azy io
Fiatoana kely eo izay ahafahanao mitaingina bisikileta ho fampiononana. Izay nataonay.
Fa! Ny ao anaty dia tena misy lahatsoratra. Manakaiky anay ary… aorian'ny 20 minitra fifampiraharahana am-pifaliana, escort avy ao Polonnaruwa miaraka amina escort :).
Eny, tsy misy na inona na inona mandra-pahatongantsika tany amin'ny paositra, avy eo raha nentina nitondrana ny fivoahana izahay, dia afaka nahita ny zava-drehetra :).
Ho an'ireo tia ny fahagola, izahay dia manoro hevitra ny fitsidihana! Mety ho sosotra ny ambiny eto. Rava-tany toy ny sisan-javatra rava. Ny fahatsapana ny angovo tamin'io toerana io dia tena sarotra rehefa mpizahatany no mirohotra amin'ny andian'ondry.